Maalinta: Oktoobar 24, 2018
Toddobaad ka hor furitaankiisa, IGA waxay ganacsi ka furatay gegada diyaaradaha ee magaalada Istanbul iyada oo cinwaankeedu ahaa “taallada guusha”. Wax ka yar hal toddobaad ka hor furitaanka garoonka cusub ee magaalada Istanbul, oo ay dunidu si weyn u sugeyso [More ...]
Iskuulka Xirfadaha Afyon, TCDD 7. Maamulaha Gobollada ayaa Lagu Qabtay Maamulayaashooda
AKÜ Afyon Vocational School TCDD 7.In lala kaashado Agaasimaha Waaxda Nidaamka Rail si loo kordhiyo aqoonta iyo xiisaha barnaamijka wareysiga ayaa la abaabulay. Waxa marti ku ah Dugsiga Farsamada ee Afyon, Hoolka Shirarka Dugsiga Farsamada [More ...]
Marka Trabzon Adapazarı Train tagaa Haydarpaşa?
Adapazarı Express waxaa lagu xirey 2012 sababtuna tahay mashruuca loo yaqaan 'YHT Construction' iyo Mashruuca Marmaray, iyo duulimaadyadii dib loo bilaabay ee 2017 oo loo sii gudbiyay Pendik. Tareenku miyuu kusocon doonaa ilaa Haydarpaşa? 2012 duullimaadyadii waa la joojiyay iyo [More ...]
BTS wuxuu codsanayaa Khabiir Cusub oo loogu talagalay Dhibaatada Tareenka ee Corlu
BTS waxay soo jiidatay xaqiiqda ah in khabiiro ku takhasusay shilalka 'luorlu train' ay adeegyo latalin ah siiyaan machadka mudo sanado ah una baahan in la cusbooneysiisto. Madaxweynaha BTS Hasan Bektas, Corlu shil tareen ah oo dhacay ka dib markii uu diyaariyey warbixinnada qaar [More ...]
Iyada oo lagu soo daabacay 23 Oktoobar 2018 oo ku saabsan Madaxtooyada Madaxtooyada, dadka 16 waxay shaqaaleysiinayaan shaqaale dowladeed magaalada 9 oo ka mid ah kuwa ka qalin jabiyay shahaadada dugsiga sare. Helitaanka Kocaeli, Burdur, Denizli, Istanbul, Kayseri, [More ...]
Madaarka Cusub ee Istanbul ayaa lagu sii daray Dhibcaha Duulimaadka ee THY
29 Airport-ka cusub ee Istanbul, wajiga koowaad oo la furi doono bisha Oktoobar, ayaa lagu daray meelaha duullimaadyada diyaaradaha ee Turkish Airlines iyo iibka tikidhada khadka tooska ah la bilaabay. Wejiga koowaad ee 29 bishii Oktoobar ee uu sameeyay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan [More ...]
Dhismaha Kiraysta wuxuu u baahan yahay Konkordato
Goobta Yertaş, oo laga aasaasay 1975 oo ay saxiixday mashaariicda muhiimka ah ee mitrooga ah ee Ankara iyo Istanbul, ayaa dalbaday heshiis la isku raacay, sababtoo ah ma ay qaadan karin lacagaheeda. SözcüDudullu-Bostancı metro wuxuu ka bilaabmay 2016, sida laga soo xigtay Bora ERDİN [More ...]
Cufnaanta gaadiidka waxaa lagu tirtiri doonaa mashruuca Gebze adan Darica Metro
Midowga Degmooyinka Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Magaalada Kocaeli Magaalo Weynta İbrahim Karaosmanoğlu, Vedat Doğusel, Gudoomiyaha Laanta Kocaeli ee Maraakiibta iyo Sibel, Madaxweynihii hore ee Rugta Ganacsiga ee Körfez [More ...]
Arifiye ee Dayactirka New Bridge
Duqa magaalada Toçoğlu wuxuu baaray buundada ka shaqeysa Arifiye goobta wuxuuna yiri: köprü Buundada u adeegi doonta xaafadeena 5, isgoysyada waxay noqon doonaan kuwa amaan ah iyo wadada 13 kilomitir waxey ku xirnaan doontaa xadka 3. [More ...]
Shaqaalaha IZBAN Way Baxsadeen Cadaalad Daran kahor Weerarka
WorkersZBAN shaqaalaha waxay u gudbeen iska caabin aan caadi aheyn. Shaqaaluhu ma gooyaan gadhka waxayna gashadaan xargaha madow ka hor shaqo joojinta. Heshiisyada wadajirka shaqada ee udhaxeeya Ururka Shaqaalaha Tareenka iyo Nidaamyada Reer Galbeedka Izmir (İZBAN) wax heshiis ah lama gaarin. İZBAN [More ...]
Mashruuca Mashruuca Uskumdar-Çekmekoy wuxuu ku guuleystey 179 kun iyo 612 rakaabkii Maalinta Kowaad
Wejigii labaad ee Metrosküdar-Ümraniye Metro Line, oo la furay maalintii hore, ayaa si weyn u muujisay khadka 'Ümraniye-Çekmeköy Metro Line. Wadarta 334 kun ee 179 rakaabka ah oo wata safarka 612 maalinta ugu horeysa ee qadka metrooga [More ...]
Galatasaray-Schalke Oo Qorsheyneysa Jadwalka Isgaadhsiinta Isboorti Ee Sabtida Ee Istanbul
Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, Horyaalada Yurub ee Champions League ayaa la ciyaari doonaa maanta, Galatasaray-Schalke 04 ciyaarta iyadoo laga dalbanayo waqtiyada dhulka hoostiisa mara oo loo kordhiyo 01.00'e. Metro Istanbul, oo ah shirkad hoos timaad Magaalada Metropolitan Municipal, waxay ku jirtaa Champions League Yurub [More ...]
Shahaadada Tayada ee Tram
Waxaa marti galiyay oo maamula Dowlada hoose ee Magaalada Izmir iyo Karşıyaka taraamyadu waxay ogolaansho ka heleen Machadka Istaandarada Turkiga. Nidaamka maaraynta isku dhafan ee Izmir Metro Konak iyo Karşıyaka sidoo kale waxaa ka mid ahaa wadooyinka tareenka. 2000 [More ...]
Iskaashiga Jarmalka ee TÜDEMSAŞ
TÜDEMSAŞ, oo iyadu magacooda sameysay sanadihii ugu dambeeyay, ayaa waxaa loo soo jeediyay inay sameyso gaari wade oo ay wada leeyihiin shirkadda Jarmalka. Qaar kamid ah masuuliyiinta shirkada ka howlgasha wax soo saarka SKODA Sivas ayaa u yimid warshad. Jarmalka [More ...]